Badalona, ​​avy amin'ny lasa romana ka hatramin'ny mpizaha tany | Vaovao momba ny dia
Louis Martinez | | Tanànan'ny Espana, Inona no ho hita
Badalona dia manana ny mampiavaka azy ho iray amin'ireo tanàna voakasiky ny fanitarana tanàna lehibe iray, raha izany Barcelona. Na izany aza, mitohy ho tanàna tsy miankina sy tanàna fahefatra be mponina indrindra izy rehetra Katalonia.
Ho fanampin'izany, ny niandohany dia miverina amin'ny fahagola indrindra indrindra, araka ny asehon'ny Iberian sy Layetan sisa tavela hita tany amin'ny tontolo iainany. Na izany aza, noforoninny tanàna izy io ny Romana manodidina ny 100 talohan'i Kristy teo ambanin'ny anarana hoe Baetulo. Raha ny marina, ny tanàna koa dia manana ny lova iray manan-danja indrindra amin'ny vanim-potoana latina any Espana. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Badalona ianao dia mamporisika anao hanohy hamaky.
1 Inona no ho hita ao Badalona
1.1 Ny Pont del Petroli, tandindon'ny tanàna
1.2 Monasiteran'ny Sant Jeroni de la Murtra
1.3 Indostrialy La Badalona
1.4 Parks, ny havokavoka maitso tena izy avy any Badalona
1.6 Ny manodidina an'i Dalt de la Vila
1.7 The Museum of Badalona
1.8 Ny tranon'ny feso sy ny zaridainan'i Quinto Licinius
Inona no ho hita ao Badalona
Ny sisan'ny Romanina dia iray amin'ireo manintona lehibe ny tanàna Catalan. Ary, eo akaikin'izy ireo, morontsiraka mahafinaritra, zaridaina tsara tarehy ary tsangambato mahafinaritra. Hitsidika ireo toerana mahaliana rehetra ireo izahay.
Ny Pont del Petroli, tandindon'ny tanàna
Pont del Petroli sy orinasa Anís del Mono
Ity zana-tongotra ity, izay 250 metatra mankany amin'ny ranomasina, dia iray amin'ireo mofo sy divay avy amin'ny tanàna Catalan. Namboarina tamin'ny 1965 izy io mba hamelan'ny mpitatitra sambo lehibe ny entany ao anaty fiara mifono vy ho amin'izany tanjona izany.
Ho te hahafanta-javatra, dia holazainay aminao fa ho potika ny tetezana amin'ny taona 2001, saingy novonjen'ny vondron'olona avy any Badalona notarihin'ilay chef pastry izy io. Joseph Valls. Amin'izao fotoana izao dia faritra tsara ho anao ny manao fampiharana scuba diving ary, ambonin'izany rehetra izany, handehananao mankafy filentehan'ny masoandro mahafinaritra.
Monasiteran'ny Sant Jeroni de la Murtra
Ho hitanao eo ampitan'ny arabe ity monasitera ity. Iray amin'ireo firavaka gothic an'ny faritanin'i Barcelona. Ny fananganana voalohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, na dia nitarina avy eo aza ny fampidirana ny tranobe, fiangonana, lakozia ary lakaly. Manasongadina ihany koa a tilikambo mpiaro izay nampiasaina hisorohana ny fanafihan'ny jiolahin-tsambo avy amin'ny morontsiraka.
Indostrialy La Badalona
Ao anatin'ny ozinina Anís del Mono
Ny tanànan'ny Catalan dia manome anao lova indostrialy marobe voadinika ihany rehefa nivoatra tamin'io lafiny io izy tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Anisan'ireo tranobe ireo miavaka ny ozinina taloha Anís del Mono, izay tranombakoka ankehitriny momba ny famelabelarana nentim-paharazana an'io zava-pisotro io.
Ilaina ihany koa ny fitsidihana ny orinasan'ny Orinasa Mpanampy Varotra sy Indostria, tranobe maoderina naorina tamin'ny 1899 avy amin'i Jaime Botey sy Garriga, izay ben'ny tanàna ihany koa. Ilay trano dia tokony ho voatendry ho an'ny tranom-bakoka tantara an-tsary. Na izany aza, nijanona vetivety ilay tetikasa.
Parks, ny havokavoka maitso tena izy avy any Badalona
Afaka Solei i Ca l'Arnús Park
Ny iray amin'ireo manintona ny tanàna Catalan dia ny valan-javaboary marobe. Totalin'ny 96 hektara ny tanàna dia faritra maitso sy havokavoka tena izy ho an'ny mponina ao aminy. Anisan'izany ny Azon'i Solei sy Ca l'Arnús zaridaina. Ity zaridaina botanika tena izy ity koa dia misy farihy sy tranobe kely, tilikambo toa ny an'ny mijery ary ny rano ary na grotto aza.
Miaraka amin'izany, ny valan-javaboary hafa ao an-tanàna dia an'ny an'ny Turó d'en Caritg, miorina amin'ny havoana; ny iray avy any Montigalá, tonga lafatra amin'ny fitsangantsanganana; ny an'i Gran Sol, miaraka amin'ny karazana Aziatika sasany; ilay avy any Nueva Lloreda, miaraka amin'ny fitaovana fanatanjahan-tena, ary ilay avy any Casa Barriga.
Morontsiraka Barca María
Manana ny tanàna morontsiraka dimy kilometatra izay manana ny fepetra tsara indrindra hahafahanao mankafy fandroana sy miaraka amin'ny fitaovana feno indrindra mba ahazoana aina ny fitsidihanao azy ireo. Anisan'ireny, hotononintsika ireo morontsiraka an'ny Barca María, ny Crystal, an'ny mpanjono, ny gara y ny blackberry.
Ny manodidina an'i Dalt de la Vila
Io no anarana nomena ny tanàna taloha Badalona, ​​nandritra ny taonjato maro ny tena foiben'ny tanàna. Araka ny eritreretinao azy dia manana tsangambato hatsaran-tarehy marobe ianao ao. Anisan'izany, ny sisa tavela amin'ny amphiteater romana en Carrer de Les Eres.
Fa ambonin'izany rehetra izany, ny sarobidy fiangonan'i Santa Maria, miaraka amin'ny rindrina Renaissance manaitra sy tilikambo lakolosy manaitra. Ary, tena akaiky azy io, ny Tilikambo taloha, lapan'ny karazana tranobe mahafinaritra nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Misongadina amin'izany ny façade plateresika sy ny rongony gothic ao aminy.
Farany, aza avela ny faritra taloha amin'ny tanàna raha tsy mahita ny tranony aristokratika amin'ny endrika Noucentista sy Modernista. Ohatra, Ca l'Amigó, Afaka Clapés ary ny House Planas.
Sahan'i Museum Badalona
Izahay efa nilaza taminareo ny momba ny lova arkeolojika lehibe hita eo ambanin'ny tanin'ny tanàna Catalan. Ny ampahany tsara amin'ireo taolam-paty ireo dia miharihary ao amin'ny tranombakoka mahavariana izay mitondra anao hatrany amin'ny arabe Baetulo tamin'ny taonjato XNUMX tal.
Ny sasany amin'ireo firavaka aseho amin'ny metatra toradroa manodidina ny 3400 dia ireo loharano mafana, ny decumanus na ny arabe lehibe ary, ambonin'izany rehetra izany, ny Venus of Badalona, sarivongana 28-centimetatra nanomboka tamin'ny fotoana nananganana ny tanàna.
Ny tranon'ny feso sy ny zaridainan'i Quinto Licinius
Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny tranombakoka dia azonao ihany koa ny mitsidika ireo toerana roa ireo. ny Trano Dolphin any ambanin'ny tany ihany koa izy io ary antsoina amin'ny anaran'ny sarobidy mozika feso Handravahan'izy ireo ny lohany mba hanangonana orana. Goavana izany trano Tilikambo romana valo metatra eo ho eo, na dia tsy mety mahita afa-tsy telonjato monja aza ianao ankehitriny.
Ho azy, Sahan'i Quinto Licinius mety handiso fanantenana anao kely izany. Ny hitanao anio dia karazana dobo iray izay, tamin'ny fotoany, dia tsy maintsy feno zavamaniry sy voninkazo. Na izany aza, afaka mahazo hevitra ianao hoe nanao ahoana izany fialamboly virtoaly atolotry ny fotodrafitrasa. Eto amin'ity toerana ity, ny Tabula Hospitalis, karazana fifanarahana izay nanamafy Licinius fahadimy ho mpiaro an'i Baetulo ary azonao jerena ao amin'ny tranombakoka ihany koa.
Zava-dehibe tokoa ny lasa romana tany Badalona izay, isan-taona, mampandroso ny tanàna ny tanàna Magna Celebration, mandritra ny fotoana itetezan'ny tafika latina ny lalàny sy ny toeran'ny mpanao asa tanana tamin'izany fotoana izany dia apetraka eo an-jorony.
Ho famaranana, manolotra be dia be anao izy io Badalona. Amin'ny lova romanina manan-danja dia tsy maintsy manampy tsangambato sarobidy ianao, valan-javaboary lehibe ary torapasika mahafinaritra. Raha mitsidika an'ity tanàna ity ianao dia tsy hanenina. Raha te hanararaotra ny dia ataonao ianao mba hanatanterahana hetsika hafa dia diniho ny anay lisitry ny valan-javaboary tsara indrindra any Catalonia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Badalona
Tenerife tora-pasika nudist